MZ 4th anniversary confirm date — MYSTERY ZILLION
March 2011 edited April 2011 in MZ News
ဒီနှစ် MZ နှစ်ပတ်လည်ကို Myanmar Tutorial ရဲ့ နှစ်ပတ်လည် နှင့် web design ဆုပေးပွဲနဲ့ အတူတူကျင်းပါမယ်။ MICT Park conference hall မှာ ကျင်းပပါမယ်။ MZ နဲ့ မြန်မာ tutorial ပူးပေါင်းပြီးကျင်းပတဲ့အတွက် ပိုမိုစည်ကားပြီး ပိုပြီး အကျိုးရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပွဲ အစီစဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုသီဟ နဲ့ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးပြီးရင် ပြန်လည်ကြေငြာပါ့မယ်။
MZ တောင် လေးနှစ်ရှိသွားပြီ။ အဲလိုပွဲကိုလာချင်ပေမယ့် ကိုယ်က နယ်မှာလေ။
Myanmar Tutorial ရဲ့ web design မှာ ဘယ်သူရပါလိမ့်မလဲ။
really happy to hear that .. that event will be best event ever ...
previous days, i hope to attend both event .. now both will celebrate together ... it'sareally great news ..
if volunteers need to perform , i am willing and happily to do so
Oh, me too .... pls do call if need help .. happy to help for suchabig event
လာမယ်လာမယ်နဲ့ မရောက်ဖြစ်ဘူး ဒီတစ်ခါတော့ ရောက်အောင်လာမယ်ဗျာ အမ်ဇက်က မမ်ဘာတွေနဲ့လည်းတွေ့ချင်တယ်
I want to know the exact place ,date and time. I am justabeginner.
I really want to learn from other members.
MMKM wrote: »
that's the date and time announced by mmtuts
Place : MICT Park (Conference Hall)
Time : 10th April, 2011 (Sunday) 9:00am - 5:00pm
if you have facebook, here's the event link
good event. need to register ?
yah.. I also wanna know.. need register??? I also want to come and wanna get knowledge from you...
အရင်နှစ်က ခရီးလွန်နေတာနဲ့မရောက်ဖြစ်ဘူး ..။ ဒီနှစ်တော့ရောက်အောင်လာမယ် ...။